ဗွီဒီယို streaming မော်ကွန်းတိုက် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: ဗီဒီယို streaming များ
Tag Archives: ဗီဒီယိုက streaming များ
Chelmsford, Mass ။ - နိုဝင်ဘာ 19, 2019 - Chattanooga, Tenn မှ Frost Cutlery သည်ဓားများ၊ ဓားများ၊ မီးဖိုချောင်သုံးအ ၀ တ်လျှော်စက်နှင့်အခြားစုဆောင်းထားသောပစ္စည်းများကို၎င်း၏အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် Cutlery Corner Network မှထုတ်လွှင့်သည်။ ၎င်းသည် Broadcast Pix ™တွင်အပတ်စဉ်မူရင်းပရိုဂရမ်များထုတ်လုပ်သည်။ ဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်မှုစနစ်။ ဒီပြပွဲကို 16p မှာ HD ထုတ်လွှင့်ပြီး Amazon, Hulu နဲ့ YouTube ကနေတစ်ဆင့်အွန်လိုင်းပေါ်ကကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ ...
Bitmovin IBC 2019 ဗီဒီယို streaming များ၏အနာဂတ်တင်ဆက်ပေးတယ်
အမ်စတာဒမ် - 30 ဇူလိုင်လ 2019 -Bitmovin, ဆန်းသစ် cloud-based ကိုဗီဒီယို streaming များဖြေရှင်းချက်ထဲမှာကမ္ဘာကြီးခေါင်းဆောင်ဘယ်နေရာမှာမဆို, ကကစားရန် developer များဖွင့်သည်ကိုမည်သို့ IBC ပြရန် 2019 (Hall14.E12) မှာထုတ်ဖေါ်အန်ကုက်လုပ်ပါနဲ့ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေး, ချောမွေ့စွာသောဗီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိမ့်မယ် ။ ဧည့်သည်များဖြတ်တောက်အစွန်းဖျော်ဖြေရေးအတွေ့အကြုံများ Bitmovin ထုတ်ကုန်ကို အသုံးပြု. ပရိတ်သတ်များမှကယ်နှုတ်ရနိုင်ပုံကိုဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဒါဇင်အသစ်သောဆန္ဒပြပွဲများကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်: ...
Videon Simplified ဗီဒီယိုလွှ မှစ. နယူး VersaStreamer
ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာ, Pa - ။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 5, 2019 - Videon, 4K နှင့် HD ကိုလွှင့်ထုတ်ကုန်များ၏တစ်ဦးဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်း developer ၎င်း၏ VersaStreamer ထုတ်ကုန်လိုင်း၏နိဒါန်းနှင့်အတူ streaming ကိုဗီဒီယို simplifying ဖြစ်ပါတယ်။ VersaStreamer သုံး RTMP စီး၏တစ်ပြိုင်နက် output ကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့်သော့ချက်လုပ်ငန်းအသွားအလာအတားအဆီးရှင်းလင်းစေပါတယ်။ ဒီစွမ်းရည်နှင့်အတူပေါင်း MPEG-TS ၏တစ်ပြိုင်နက် output ကိုထောက်ခံကြောင်း, HLS ဖွစီးနှင့်အသံဖမ်း, VersaStreamer အမှာစကား ...
•စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် Lightspeed တိုက်ရိုက်ဖြေရှင်းချက်• Telestream Lightspeed တိုက်ရိုက်အတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ် PERSEUS Plus အား encoding ကဇာတိဟာ့ဒ်ဝဲကိုအသုံးပြုပြီးအားလုံး device များအတွက်ပံ့ပိုးမှု PERSEUS Plus အားဖြန့်ကျက်ယနေ့ V ကိုအဘို့အဆင်သင့်တစ်ခုတည်းသောမျိုးဆက်သစ် codec ကိုမှန်ကန်စေသည်•အရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှုတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့် Workflows ထောက်ပံ့ပေးပါသည် -Nova, ဗွီဒီယိုချုံ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့က၎င်း၏မျိုးဆက်သစ် PERSEUS Plus အားထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ...
1 ၏စာမျက်နှာ 512345 »